Mariin Biyyoolessaa Mootummaa PPn qopheeffamaa jiru, kan Itophiyummaan irratti jabaatuu qabuu dha jedhame – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooMariin Biyyoolessaa Mootummaa PPn qopheeffamaa jiru, kan Itophiyummaan irratti jabaatuu qabuu dha jedhame
[SBO – AMAJJI 08,2022] Mariin Biyyoolessaa kun, Waltajjii Itophiyummaan irratti jabaatee mul’achuu qabuu dha malee, kan irratti walqeeqamu akka hin taane miseensi KHR IZEMA fi Komishineerri Komishinii Investimentii Obbo Girmaa Seeyfuu FANA irratti ibsaniiru.
IZEMAAn torban darbe kana mootummaa PP dugda duubaan mootummaa biraa ministeerota 22 qabu hundeessuu beeksisee jira. Yaada IZEMAn qabu kana irraa ka’uudhaan namootni baay’een gara itti mariin kun deemuudhaaf abuurratee jiru garanumaa akeekaa jiran.
Federaalummaan Sabummaa irratti hundaa’ee jiru, Sabummaa fi sab-boonummaan waltajjii kanaan qorumsa seenu; keewwattootni garagaraa heera biyyattiis qaamota sagalee wayyaba ta’aniin kaafamanii akka jijjiiraman ykn wayyeeffamaniif qabxiilee ijoo iji irra kaa’atamee jiru ta’uun ibsamaa jira.
KEEYYATNI 39 kan mirga hiree murteeffannaa sabootaa beeku qabxii jabaa falammii heera kana irratti dhihaatu ta’uunis garanumaa akeekamaa jira. Dhimmi Alaabaa Itophiyaa lummuxxiin deebi’uu qabaa fi kanumti ammaa itti fufuu qaba jedhus marif akka dhihaatu ibsamaa jira.
Komiishina Marii Biyyaalessaaf PPn utube, walabummaa isaa irratti shakkii kan qaban baay’ee oggaa ta’an, marii kana irratti dhaabotni ykn paartileen mormitootaa, dhaabbattootni; hayyootni, maanguddootni biyyaa fi namootni dhuunfaa irratti hirmaatan eenyu faa akka ta’an hanga ammaa waan adda ba’ee ifatti ibsame hin jiru.